Dimitri Payet oo kala caddeeyey mustaqbalkiisa… (Miyuu ka tagayaa kooxda West Ham?) – Gool FM
Dimitri Payet oo kala caddeeyey mustaqbalkiisa… (Miyuu ka tagayaa kooxda West Ham?)
(London) 15 Luuliyo 2016 – Xiddiga kooxda West Ham United ee Dimitri Payet ayaa xaqiijiyey inuu sii joogi doono kooxdiisa, waxaana uu meesha ka saaray wararkii xanta ahaa ee suuqa kala iibsiga kuwaasoo sheegayey inuu kooxda ka tagi doono.
Dimitri Payet ayaa qaab ciyaareen fiican ku soo bandhigay koobka qarammada Yurub ee EURO 2016 oo lagu soo xiray Waddanka Faransiiska, waxaana uu tartankaas ka dhaliyey 3 gool.
Xiddiga xulka qaranka Faransiiska ayaa dalkiisa ka caawiyey inay gaaraan final-ka EURO 2016, inkastoo uu koobka kaga guuleystay xulka Portugal.
Payet waxa uu qubay warar xan ah oo la isla dhexmarayey usbuucyadii dhawaa, kuwaasoo sheegayey inaan la hubin mustaqbalkiisa kooxda.
Wareysi uu siiyey jariiradda The Sun ayuu Dimitri Payet ku xaqiijiyey inuu boqolkiiba boqol (100%) sii joogi doono kooxdiisa, waxaana uu yiri: “Anigu 100% waxaan sii joogi doonaa West Ham, waan jeclahay kooxda, waan awoodaa inaan taa u sheego taageerayaasha Hammers.”
29-sano jirkaan ayaa sidoo kale ka hadlay wararka la xiriiriyey kooxaha Real Madrid iyo Chelsea usbuucyadii dhawaa, waxaana uu xusay inuu maqlay arrintaas, laakiin uu ku adkaysano inuu la sii joogo West Ham.
“Waan maqlay dhammaan xiisahaas, way i ammaaneen, laakiin waan jeclahay West Ham, waxaa soo maray xilli ciyaareed cajiib ah, ma sugi karo intaan ku ciyaarayo garoonka Olympic.”
Borussia Dortmund oo ogolaatay heshiis ay kula soo wareegayso Mario Gotze
Maaliyadda cusub ee Manchester United oo markale si qarsoodi ah loogu soo bandhigay Hong Kong + Sawirro